Ciidan ka daacadd u ah jabhadda Raas-kambooni oo dad ku waxyeeleeyay mid ka mida xaafadaha Kismaayo. – Radio Daljir
Ciidan ka daacadd u ah jabhadda Raas-kambooni oo dad ku waxyeeleeyay mid ka mida xaafadaha Kismaayo.
Oktoobar 16, 2012 5:18 b 0
Kismaayo, Oct 16- Maleeshiyada raaskamboni ee qeybta ka ah ciiidamada la wareegay dhawaan magaalada kismayo ayaa xoog ku galay xaafada far-janno ee kismayo halkaas oo ah dhulki loo yaqiinay ceymiski ee dowladii somaliya? oo ay daganyihiin dad rayid ah.
Ciidamadan ayaa la sheegay in ujeedadoodi ay aheyd inay la wareegaan xaafadaas. iyadoo dhawaan ay soo saareen amaro ay ku farayaan dadka dagan xaafadaasi inay isaga guuraan.
Waxaana Howlgalo ciidamadaas ay ka sameeyeen halkaasi ku dhaawacmay laba qof oo rayid kuwaasoo kamid ah dadkii daganaa muddo xaafaddaasi.
Maxamed Daahir Yuusuf oo kamid ah dadka xaafada far-janno ee kismaayo sheegeyna in ciidamda Raas-kambooniyiinta ay jirdil? u geysteen ayaa Radio daljir oga waramay sida ay wax u dheceen.
Tan iyo markii ciidanka huwantaa ay la wareegeen magaalada Dekaddaa ee Kismaayo waxaa soo baxay cabasho ballaaran oo ka imaanaysay qaar ka mida beelaha wax ka daga gobolka Jubadda hoose, waxayna sheegayaan in awoodii magaalada ay fara marooqsatay mid ka mida beelaha xooggagii wada qabsaday magaaladda.
Ammaan darrada magaalada haraysay iyo falalkan hada soo baxaya ayaa ku soo aaya xili lagu mashquulsan yahay maamul goboleed ka unkuma gobolada Gedo iyo Jubbooyink, oo hada yagleelidiisa lagu mashquulsan yahay.
Hay’adda NESHA oo dayactir ku bilowday wadada isku xirta Bosaso iyo Qardho
AMISOM oo sheegtay ciidamo cusub inay gaareen Baladwayne